ခရီးသွားရင်း အသုဘတဲနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှားပီး သရဲဖျော်တဲ့ လ္ဘက်ရည်ဝင်သောက်မိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ...! - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / ခရီးသွားရင်း အသုဘတဲနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှားပီး သရဲဖျော်တဲ့ လ္ဘက်ရည်ဝင်သောက်မိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ...!
ခရီးသွားရင်း အသုဘတဲနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှားပီး သရဲဖျော်တဲ့ လ္ဘက်ရည်ဝင်သောက်မိတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ...!
Apann Pyay 9:00 PM ပရလောကအကြောင်း Edit
အဲ့ဒီညက တော်တော့်ကို မှောင်မိုက်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ည…။ လမ်းမီးတိုင်မရှိ…လရောင်မရှိတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က လကွယ်ညကို ညီညီတစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်မီးရောင်အားကိုးနဲ့သာ ဖြတ်ကျော်နေခဲ့ရတယ်။
ညီညီရဲ့ အလုပ်က online ပေါ်ကနေ ဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူလိုသူတို့ထံက စရံငွေယူပြီး ကျယ်ဂေါင်မှာ ဆိုင်ကယ်သွားဝယ်ပေးရတယ်…ပြီးရင် မူဆယ် ကားဂိတ်ကနေတဆင့် မှာယူတဲ့နယ်အသီးသီးကို ကားနဲ့ထည့်ပေးပြီး ဆိုင်ကယ်ရောက်မှ သူ့ဆီငွေအကျေချေပေးရတဲ့စနစ်နဲ့ စီးပွားရှာနေသူတစ်ယောက်ပေါ့…။
ဒီအလုပ်ကိုသူလုပ်လာခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်နီးပါးတော့ရှိပြီ…။ သူနဲ့အကျိုးပေးတယ်ပြောရမလားပဲ… အော်ဒါတွေလဲအရမ်းတက်သလို ဝင်ငွေတွေလည်းမြိုးမြိုးမြတ်မြတ်ရခဲ့တယ်…။
အဲ့ဒီကနေတဆင့် ဆိုင်ကယ်အကြောင်းကိုတဖြေးဖြေးနားလည်လာတော့ ဆိုင်ကယ်လောကထဲကို သူတစတစဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်…။
ဆိုင်ကယ် အော်ဒါလက်ခံပြီးဝယ်ပေးတဲ့အလုပ်အပြင် ဆိုင်ကယ်ဝယ်ရောင်းအလုပ်ကိုပါတွဲပြီး လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
အခုလဲ မန္တလေးကဆိုင်ကယ်second hand တစီးကို ဝယ်ပြီး မူဆယ်ကို မောင်းပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့…အော်ဒါလက်ခံပြီးဝယ်ပေးတုံးက Express ကားနဲ့ထည့်ပေးတာကအလုပ်ဖြစ်ပေမယ့် ဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့အခါကျတော့ တွက်ချေမကိုက်တော့ဘူး…အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပဲမောင်းပြီး သူပြန်လာခဲ့တယ်…။
အရင်အခေါက်တွေတုံးကတော့ မူဆယ်အနီးအနားနေရာတွေပဲ ဝယ်ရောင်းလုပ်ခဲ့ပေမယ့် အခုတခေါက် မန္တလေးက ဘီးတစီးက လက်မလွတ်နိုင်အောင်ကို တန်လွန်းနေတဲ့အတွက် အရဲစွန့်ပြီး သူလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့…။
အသွားတုံးက Express ကားပေါ်မှာမို့ ဘေးဘီဝဲယာ သိပ်သတိမထားမိပေမယ့် အခုအပြန်ကျတော့ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့အတွက် စိတ်ထဲအားငယ်သလိုလို ကြောက်သလိုလိုတော့ဖြစ်မိတယ်…။
ဆိုင်ကယ်ဒိုင်ခွက်မှာပါတဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် တစ်နာရီတောင်ထိုးတော့မယ်…။ “တစ်နာရီတောင်ထိုးတော့မှာပဲ…” သူတီးတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်…။
အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာ သူ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးတည်း…။ ရံဖန်ရံခါမှ ကားတစီးတလေလောက်ဖြတ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့ တလောကလုံး သူ့ဆိုင်ကယ်စက်သံကလွဲပြီး မှောင်လို့ မဲလို့ တိတ်လို့ဆိတ်လို့…။
မောင်းလာသည်မှာ အချိန်အတော်ကြာပြီဖြစ်သောကြောင့် ခါးတွေညောင်းပြီး လက်မောင်းတွေပါတောင့်နေပြီဖြစ်သည်။ “ရှေ့နားမှာဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်တွေ့ရင်တော့ ဆိုင်ကယ်လဲခနအနားပေးရင်း လူလဲအညောင်းပြေအညာပြေ ခနနားဦးမှ…” သူစိတ်ထဲမှာ တွေးထားလိုက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ကိုသာဂရုတစိုက်နဲ့ဆက်လက်မောင်းနေလိုက်တော့တယ်…။
အတော်ကြာကြာမောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ရှေ့ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီက မီးရောင်လေးတွေကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ်…။
“ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်တဆိုင်ဆိုင်တော့ဖြစ်တန်ကောင်းပါရဲ့…” တစ်ယောက်တည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးစကားဆိုလိုက်ရင်း ဆိုင်ကယ်အရှိန်ကို လျှော့ချလိုက်တယ်။
တဖြေးဖြေးနဲ့အနားနီးလာတော့ အလင်းရောင်မှုန်မှုန်မွှားမွှားအချိုက မခို့တရို့ဖျာကျနေသော လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တဆိုင်ကို ညီညီတွေ့လိုက်ရတယ်။
“အဟား…ငါတော့ကံကောင်းတာပဲ” ထိုင်ခုံတွေ စားပွဲတွေနဲ့ မီးလင်းနေတဲ့ အဲ့ဒီခပ်ကုပ်ကုပ်ဆိုင်လေးရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ်ကိုထိုးရပ်လိုက်တယ်…။
မှိန်ပျပျမီးရောင်အောက်မှာ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်က ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လွန်းနေသည်။ “လူလည်းတစ်ယောက်မှမတွေ့ပါလား…” ဆိုင်ရဲ့အတွင်းဘက်ထိ သူဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်……။ အဲ့ဒီတော့မှ ကောင်တာစားပွဲပေါ်ခေါင်းတင်ထားပြီး ပျင်းရိပျင်းတွဲပုံစံနဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို ညီညီတွေ့တော့တယ်….။
“ဆိုင်ရှင်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်……”ဆိုင်ရှင်မိန်းမကလည်း ဆိုင်ပေါက်ဝဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးမှောက်နေတာမို့ ညီညီဝင်လာတာကိုမြင်ရသည်။ အဲ့ဒီမိန်းမကြီးက စားပွဲပေါ်ပါးအပ်ပြီး ငြိမ်သက်နေပေမယ့် မျက်လုံးတွေကိုတော့ဖွင့်ထားတယ်…ပြီးတော့ညီညီ့ကို စိုက်ကြည့်နေတယ်…။
“လ္ဘက်ရည် ပေါ့ကျ တစ်ခွက်လောက်…” အနားမှာတွေ့တဲ့ ဝိုင်းတခုမှာ ဝင်ထိုင်ရင်း ညီညီလှမ်းမှာလိုက်တယ်…။ ရှေ့ဆက်ပြီးမောင်းရဦးမှာဆိုတော့ အိပ်မငိုက်အောင် လ္ဘက်ရည်ကို ခပ်ကျကျလေးသောက်ဖို့ ညီညီဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ဆိုင်ရှင်မိန်းမက စားပွဲပေါ်ပါးအပ်ပြီး မှောက်နေရာကနေ လေးလေးတွဲ့တွဲ့ဖြေးဖြေးချင်းထလာတယ်…ပြီးတော့ အတွင်းဘက်ဝင်သွားတယ်… အဲ့ဒီနောက် လ္ဘက်ရည်ဖျော်သံ…… လ္ဘက်ရည်ခွက်ထဲဇွန်းထည့်မွှေသံတွေကြားနေရတယ်… ခဏနေတော့ သူ့စားပွဲပေါ်လ္ဘက်ရည်ပန်းကန်လာလျပေးပြီး ဘာစကားမှမပြောပဲ ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်…။
ပြီးတော့ ခုနကစားပွဲပေါ်မှာပါးအပ်ပြီး ပြန်မှောက်နေပြန်တယ်…။ “ဘယ်လိုလ္ဘက်ရည်ဆိုင်လဲဟ…တစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လား…” ညီညီစိတ်ထဲ ဘဝင်မကျသလိုမသိုးမသန့်ဖြစ်သလိုလိုဖြစ်သွားပေမယ့် ဆိုင်ကယ်ရော လူရော ခေတ္တအနားယူရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်မို့ စိတ်ထဲမထားတော့ပဲ လ္ဘက်ရည်ခွက်ကို ယူပြီးမော့ချလိုက်တော့တယ်……။
“အား………………… ဘယ်လိုအရသာကြီးလဲ ! ” အလန့်တကြားထအော်မိပြီး လ္ဘက်ရည်ခွက်ကိုအောက်ခံပန်းကန်ပြားပေါ်ပြန်တင်လိုက်တယ်…။
အရသာက သူတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မသောက်ဖူးတဲ့ အရသာကြီး…။ ချိုတာလည်းမဟုတ်…စိမ့်တာလည်းမဟုတ်… ခါးတာလည်းမဟုတ်…ကျတာလည်းမဟုတ်… ဘာအရသာကြီးမှန်းကိုမသိတဲ့ အရသာကြီး……။ ဒေါသဖြစ်သွားတဲ့ ညီညီမျက်လုံးတွေက လ္ဘက်ရည်ဖျော်ပေးတဲ့ မိန်းမဆီရောက်သွားတယ်…။
သူမကတော့စားပွဲပေါ်ပါးတင်ထားတုံး… ခံစားမှုမဲ့တဲ့ လူသေမျက်လုံးတွေနဲ့ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတုံး… ညီညီ ရုတ်တရက်ကျောထဲစိမ့်ခနဲဖြစ်သွားတယ်…။ စောနကထွက်နေတဲ့ ဒေါသတွေတောင်ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ပျောက်ကုန်ကြတယ်… ပြီးတော့ ဒီနေရာက မြန်မြန်သွားမှလို့လည်းသူတွေးမိလိုက်တယ်…။
“ဒီမှာ ပိုက်ဆံ ထားခဲ့ပြီ…” သူကျသင့်ငွေကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲကနေ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်…။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်တက်ခွပြီး စက်မနှိုးခင် အဲ့မိန်းမကြီးကို တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့… မိန်းမကြီးက ထုံးစံအတိုင်း စားပွဲပေါ်မျက်နှာကြီး တစောင်းတင် အသက်မပါတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ သူ့ကိုကြည့်နေတုံးပဲ…။ ညီညီ ဘာမှဆက်စဉ်းစားမနေတော့ပဲ ဆိုင်ကယ်စက်နှိုးပြီး ဝေါခနဲဆောင့်ထွက်လာခဲ့တော့တယ်…။ တိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေတဲ့ လမိုက်ညကို ညီညီ ဆိုင်ကယ်သံက ပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးသွားပြန်တယ်။
“တောက်ခ်!…” အရေးထဲမှ အရာပေါ်ဆိုသလို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်နဲ့ ဝါးနှစ်ပြန်ကျော်ကျော်လောက်အကွာအဝေးမှာ ဆိုင်ကယ်က ထိုးရပ်သွားတယ်…။ စက်နှိုးလို့လဲမရတော့… ညအချိန်မတော် လူကလဲပြတ် ဆိုင်ကယ်ကလည်း ဆီရေလေဝိုင် အကုန်စစ်ပြီးမှ စီးလာတာ…ခုမှဘာထဖောက်မှန်း သူမသိ…။
တော်တော်တော့အကြံအိုက်သွားတယ်။ နာရီဝက်နီးပါးကြာတဲ့အထိ ဆိုင်ကယ်ကိုစက်ပြန်နှိုးလိုက် ပလပ်ဖြုတ်ဆေးလိုက်စသဖြင့်မျိုးစုံလုပ်နေပေမယ့် စက်ကနှိုး၍ မရ…။ ဒီပုံအတိုင်းဆိုလမ်းမပေါ်မှာပဲမိုးလင်းတော့မယ့်ပုံ…။ ခြင်တွေကလည်းမတရားကိုက်လာသည်။ ခြင်ပြေးလိုပြေးညား စီးကရက်တလိပ်မီးညှိသောက်သော်လည်းမရ…။
စီးကရက်သောက်ရင်း ညီညီ စဉ်းစားလိုက်တယ်။ ခုနကသူဝင်ခဲ့သည့်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကသူကြားဖူးတဲ့ ကျတ်ကုန်းတို့ဘာတို့လိုဖြစ်နေမလား… ဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်အစစ်လား…။ ဒါကိုလဲသူသိချင်တယ်…။
“ဟူးး…မထူးတော့ဘူး နောက်ပြန်လှည့်တွန်းသွားပြီး အကူအညီတောင်းရတော့မှာပဲ…”
စီးကရက်လက်ကျန်လေးကို ခပ်ပြင်းပြင်းဖွာရှိုက်လိုက်ပြီး နင်းချေပစ်ကာ ဆိုင်ကယ်ကို လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ဘက်သို့ပြန်တွန်းလာခဲ့လိုက်တော့တယ်…။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်စရာကလဲဒီတနည်းပဲရှိတော့တယ်…” တစ်ယောက်ထဲ တီးတိုးရေရွတ်ရင်း ဆိုင်ကယ်ကို ဆက်တွန်းလာလိုက်တယ်။ လူကလည်းအတော့်ကိုမောနေပြီ်။ချွေးများလဲရွှဲနစ်နေပြီ…။
လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ရောက်တော့ ဆိုင်ကယ်ကိုဒေါက်ထောက်ပြီး ဆိုင်ထဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့… “ဆိုင်ကယ်ပျက်လာတာလား…” ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးကလှမ်းမေးတယ်…။ “ဟုတ်ကဲ့…” “မနက်ကျရင်တော့ ဆိုင်ကိုလူတွေလာလိမ့်မယ်…အဲ့ခါကျ……အကူအညီတောင်းလိုက်ပေါ့…ဒီညတော့……ဒီမှာပဲခနတည်း
ပါ” “ရတယ်…” ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီး၏ အသံကခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်နေတယ်။
ရုတ်တရက် ညီညီ မျက်လုံးတို့က သူထိုင်ခဲ့သောဝိုင်းသို့ရောက်သွားတော့… “ဟင်! ” သူတင်ထားခဲ့သော ပိုက်ဆံနဲ့ လ္ဘက်ရည်ခွက်က အခုထိမသိမ်းရသေး…။ဒီမိန်းမကြီးတော်တော်အပျင်းကြီးတာပဲလို့ ညီညီတွေးလိုက်မိတယ်…။
“ဒါနဲ့ အမက ဒီမှာတစ်ယောက်ထဲနေတာလား…” “အေး……ဟုတ်……တယ်” “ညလုံးပေါက်ဖွင့်တာလား…”
“အေး……ဟုတ်……တယ်” “ယောက်ျားသားမရှိဘူးလား ညလုံးပေါက်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထဲဆိုတော့အဆင်ပြေရဲ့လား…” ပျင်းခြောက်ခြောက်ဖြစ်နေလို့ ညီညီ က ဟိုမေးဒီမေးမေးနေလိုက်တယ်…
“အော်…ဟုတ်ကဲ့…” “မင်းအနားယူရင်ယူတော့လေ…လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်……ငါတစ်ယောက်ထဲမို့လို့သာ ဆိုင်ထိုင်စောင့်နေရတာ……အရမ်းအိပ်ချင်နေပြီ……ငါဝင်အိပ်တော့မယ်……” “ဟုတ်……ဟုတ်” ဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီးက ပျင်းရိလေးတွဲ့စွာထပြီး အတွင်းထဲသို့ ဖြေးညှင်းစွာ တလှမ်းချင်းဝင်သွားတယ်… “သူတော်တော်အိပ်ချင်နေပုံပဲ…ငါ့လိုသူစိမ်းကိုတောင်စိတ်ချလက်ချထားပြီး ဝင်အိပ်သွားတယ်……” ဘာရယ်မဟုတ် ညီညီတွေးမိလိုက်တယ်…။အဲ့ဒီနောက် ခရီးလဲပန်းလာတာမို့ စားပွဲနှစ်လုံးဆက်ပြီးတက်အိပ်လိုက်တော့တယ်…။
“ညီလေး…ညီလေး……” တစုံတယောက်ရဲ့လှုပ်နှိုးမှုကြောင့် ညီညီ အိပ်နေရာကနေလန့်နိုးသွားတယ်…။ “ထပါအုံးညီလေးရဲ့…” “ဗျာ…ဟုတ်…” မျက်လုံးနှစ်လုံးကိုအားယူပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မိုးစင်စင်တောင်လင်းနေပြီ…။လူကြီးတစ်ယောက်နှင့်အတူ အခြားလူငယ်သုံးလေးဦးကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
“ညီလေးက ဘယ်ကလဲ…ဒီကိုဘာလာလုပ်တာလဲ…” “ဗျာ…ကျနော်…ကျနော်ကခရီးသွားပါ…ညကဆိုင်ကယ်ပျက်သွားလို့ ဒီဆိုင်မှာအကူအညီတောင်းပြီး ခနဝင်တည်းတာပါ…” “ဟေ…” ညီညီစကားကိုကြားတော့ အဲ့လူတွေမျက်နှာမှာ အံ့သြသလိုလို ထိတ်လန့်သွားသလိုလို အမူအရာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်…။
“ဘာဖြစ်လို့လဲခဗျ…” “ဘာ……ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး…ညီ…ညီလေးညကဘယ်သူု့ကို အကူအညီတောင်းခဲ့တာလဲ”
“ဘယ်သူရှိရမှာလဲဗျ…ဒီဆိုင်ရှင်မိန်းမကြီး ကိုပေါ့ဗျာ……” “ဟာ”…… လူစိမ်းတစ်သိုက် နောက်ကိုအနည်းငယ်ဆုတ်သွားကြတယ်…ဒီလူတွေရဲ့အမူအရာကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းနေတယ်…
“ဘာများဖြစ်လို့လဲခင်ဗျ…” “ညီ…ညီလေး…ညက အကူအညီတောင်းခဲ့တဲ့ မိန်းမက ညီလေးနောက်က မိန်းမလား……” လူစိမ်းတွေပြောလို့ညီညီနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့… “အောင်မလေးဗျ………” ငယ်သံပါအောင်အော်ပြီး သူထဆင်းပြေးလာလိုက်တယ်။
မပြေးနေနိုင်ရိုးလား… သူအိပ်နေတဲ့နေရာရဲ့နောက်မှာ မိန်းမအလောင်းတလောင်းကဆန့်ဆန့်ကြီး…။ “ဟာ…ဘာ…ဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ…ဒီမိန်းမကြီးက ဘာလို့သေသွားတာလဲ…” “သေတာနှစ်ရက်ရှိပြီ…”
“ဗျာ……” လူစိမ်းတဦး၏ စကားကြားတော့ ညီညီပိုပြီးခေါင်းနားပန်းကြီးသွားသည်။
“မ…မဖြစ်နိုင်တာပဲဗျာ…မနေ့ညကမှ ကျနော်နဲ့စကားပြောနေသေးတယ်…” “ဒါဆိုရင်တော့ ညီလေး သရဲအခြောက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်မယ်…”
ညီညီနှုတ်က စကားတို့ထပ်ထွက်မလာတော့…။ “ဟုတ်တယ်ကွ …ငါတို့ကရွာပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းမို့လို့ ရွာပြင်မှာပဲပြင်ထားတာ…” ညီညီညကသူတင်ထားသောပိုက်ဆံကိုသတိရသွားပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ ပိုက်ဆံက ညကတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း…။ လ္ဘက်ရည်ခွက်ကတော့မရှိ…။
ဒီမိန်းမကြီးကသေတာနှစ်ရက်ရှိပြီဆိုတော့ သူညက ညီညီကိုဖျော်တိုက်တဲ့ လ္ဘက်ရည်ကရော……ဘာလဲ…ညီညီ မစဉ်းစားတတ်တော့…။ “ဟိုစားပွဲပေါ်ကလ္ဘက်ရည်ခွက်လေးများအကိုတို့သိမ်းလိုက်မိသေးလား…”
“ဘာလ္ဘက်ရည်ခွက်လဲ…မသိမ်းပါဘူး…ငါတို့လာထဲက မင်းကိုအလောင်းဘေးနားအိပ်နေလို့ တန်းပြီးလာနှိုးတာ…”
“ဟာ…ဟုတ်လား…ဒါဆို ဒီလ္ဘက်ရည်ဆိုင်ကရောပိတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်လား…” “ဘာလ္ဘက်ရည်ဆိုင်လဲ…ဘာလ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှမဟုတ်ဘူး…အလောင်းအတွက်ပြင်ထားတဲ့အလောင်းစင်နဲ့…
“ဗျာ……” ညီညီ အခုမှသတိထားကြည့်မိတော့ ညကသူတွေ့ခဲ့တဲ့ ထိုင်ခုံတွေစားပွဲခုံတွေက လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မို့ချထားတဲ့ခုံတွေမဟုတ်ပဲ…အသုဘအတွက်ချထားတဲ့ ခုံတွေစားပွဲတွေဖြစ်နေတယ်…။
ဟိုမိန်းမကြီးညက ခေါင်းတစောင်းတင်ထားသည့်ကောင်တာစားပွဲကလည်း အခေါင်းကြီး ဖြစ်နေတယ်…။ “ဟုတ်တယ်ကွ…ငါတို့လဲ အသုဘစောင့်ဖို့ ဒီနှစ်ကောင်ကို အရက်ဖိုးပေးပြီး လွှတ်ထားတာ…ညကအရက်ဆိုင်မှာအမူးလွန်ပြီး လာမစောင့်မိဘူးတဲ့လေ…အဲ့ဒါနဲ့ဒီမနက်လာကြည့်တော့မင်းကိုတွေ့တာနဲ့ငါ့ကိုလာခေါ်ကြတာပဲ…”
“အကိုက ……” “အေး ငါက ဒီနားကရွာက ရာအိမ်မှူးပဲ…နာမည်က ကိုပြည့်လို့ခေါ်တယ်…” “ဒီနားမှာရွာရှိတယ်လား…ကျနော်ညက မတွေ့မိပါဘူး…” “ရှိတယ်…ဒါပေမယ့်ကားလမ်းဘေးက လှည်းလမ်းအတိုင်းဆင်းသွားရတာ…တော်တော်တော့ဝေးတယ်…”
“အော်…ဒါ့ကြောင့် ညကမမြင်မိတာကိုး…ဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားဆိုတာကရော…” “သူ့ယောက်ျားထွန်းမောင် ဆုံးသွားတာဖြင့်အရိုးတောင်ဆွေးတော့မယ်ဟ…” “ဗျာ…………”
ဟိုင်းဝေးလမ်းပေါ်မှာ ခရီးသွားရင်း အသုဘတဲနဲ့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှားပီး သရဲဖျော်တဲ့ လ္ဘက်ရည်ဝင်သောက်မိတဲ့ ညီညီတစ်ယောက်…
အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်ကိုတတ်နိုင်သမျှ ကားနဲ့ပဲတင်ပြီး မလွှဲသာတဲ့အခါမျိုးမှသာ ဆိုင်ကယ်နဲ့ကိုယ်တိုင်သွားတော့တယ် … သွားတဲ့အခါလည်း လမ်းမှာ ဘယ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေ့တွေ့ဝင်မသောက်ရဲတော့ပါဘူးတဲ့ဗျာ……………။ ။
Credit: ပရလောက၏ သည်းထိတ် ရင်ဖို ဖြစ်ရပ်များ
အဲ့ဒီညက တျောတေျာ့ကို မှောငျမိုကျတိတျဆိတျနတေဲ့ည…။ လမျးမီးတိုငျမရှိ…လရောငျမရှိတဲ့ အဝေးပွေးလမျးမပျေါက လကှယျညကို ညီညီတဈယောကျ ဆိုငျကယျမီးရောငျအားကိုးနဲ့သာ ဖွတျကြျောနခေဲ့ရတယျ။
ညီညီရဲ့ အလုပျက online ပျေါကနေ ဆိုငျကယျဝယျယူလိုသူတို့ထံက စရံငှယေူပွီး ကယျြဂေါငျမှာ ဆိုငျကယျသှားဝယျပေးရတယျ…ပွီးရငျ မူဆယျ ကားဂိတျကနတေဆငျ့ မှာယူတဲ့နယျအသီးသီးကို ကားနဲ့ထညျ့ပေးပွီး ဆိုငျကယျရောကျမှ သူ့ဆီငှအေကခြေပြေေးရတဲ့စနဈနဲ့ စီးပှားရှာနသေူတဈယောကျပေါ့…။
ဒီအလုပျကိုသူလုပျလာခဲ့တာ တဈနှဈကြျောနှဈနှဈနီးပါးတော့ရှိပွီ…။ သူနဲ့အကြိုးပေးတယျပွောရမလားပဲ… အျောဒါတှလေဲအရမျးတကျသလို ဝငျငှတှေလေညျးမွိုးမွိုးမွတျမွတျရခဲ့တယျ…။
အဲ့ဒီကနတေဆငျ့ ဆိုငျကယျအကွောငျးကိုတဖွေးဖွေးနားလညျလာတော့ ဆိုငျကယျလောကထဲကို သူတစတစဝငျရောကျလာခဲ့တယျ…။
ဆိုငျကယျ အျောဒါလကျခံပွီးဝယျပေးတဲ့အလုပျအပွငျ ဆိုငျကယျဝယျရောငျးအလုပျကိုပါတှဲပွီး လုပျကိုငျခဲ့တယျ။
အခုလဲ မန်တလေးကဆိုငျကယျsecond hand တစီးကို ဝယျပွီး မူဆယျကို မောငျးပွီးပွနျလာခဲ့တယျပေါ့…အျောဒါလကျခံပွီးဝယျပေးတုံးက Express ကားနဲ့ထညျ့ပေးတာကအလုပျဖွဈပမေယျ့ ဝယျရောငျးလုပျတဲ့အခါကတြော့ တှကျခမြေကိုကျတော့ဘူး…အဲ့ဒါကွောငျ့ကိုယျတိုငျပဲမောငျးပွီး သူပွနျလာခဲ့တယျ…။
အရငျအခေါကျတှတေုံးကတော့ မူဆယျအနီးအနားနရောတှပေဲ ဝယျရောငျးလုပျခဲ့ပမေယျ့ အခုတခေါကျ မန်တလေးက ဘီးတစီးက လကျမလှတျနိုငျအောငျကို တနျလှနျးနတေဲ့အတှကျ အရဲစှနျ့ပွီး သူလုပျခဲ့တယျပေါ့…။
အသှားတုံးက Express ကားပျေါမှာမို့ ဘေးဘီဝဲယာ သိပျသတိမထားမိပမေယျ့ အခုအပွနျကတြော့ တဈယောကျထဲဖွဈနတေဲ့အတှကျ စိတျထဲအားငယျသလိုလို ကွောကျသလိုလိုတော့ဖွဈမိတယျ…။
ဆိုငျကယျဒိုငျခှကျမှာပါတဲ့ ဒဈဂဈြတယျနာရီကိုကွညျ့လိုကျတော့ မနကျ တဈျနာရီတောငျထိုးတော့မယျ…။ “တဈနာရီတောငျထိုးတော့မှာပဲ…” သူတီးတိုးရရှေတျလိုကျတယျ…။
အဝေးပွေးလမျးမကွီးပျေါမှာ သူ့ဆိုငျကယျတဈစီးတညျး…။ ရံဖနျရံခါမှ ကားတစီးတလလေောကျဖွတျသှားတာကိုတှရေ့တယျ။ ကနျြတဲ့အခြိနျတှကေတော့ တလောကလုံး သူ့ဆိုငျကယျစကျသံကလှဲပွီး မှောငျလို့ မဲလို့ တိတျလို့ဆိတျလို့…။
မောငျးလာသညျမှာ အခြိနျအတျောကွာပွီဖွဈသောကွောငျ့ ခါးတှညေောငျးပွီး လကျမောငျးတှပေါတောငျ့နပွေီဖွဈသညျ။ “ရှနေ့ားမှာဆိုငျတဆိုငျဆိုငျတှရေ့ငျတော့ ဆိုငျကယျလဲခနအနားပေးရငျး လူလဲအညောငျးပွအေညာပွေ ခနနားဦးမှ…” သူစိတျထဲမှာ တှေးထားလိုကျပွီး ဆိုငျကယျကိုသာဂရုတစိုကျနဲ့ဆကျလကျမောငျးနလေိုကျတော့တယျ…။
အတျောကွာကွာမောငျးလာပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ ရှခေ့ပျလှမျးလှမျးဆီက မီးရောငျလေးတှကေိုသူတှလေို့ကျရတယျ…။
“ညလုံးပေါကျဖှငျ့တဲ့ဆိုငျတဆိုငျဆိုငျတော့ဖွဈတနျကောငျးပါရဲ့…” တဈယောကျတညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုအားပေးစကားဆိုလိုကျရငျး ဆိုငျကယျအရှိနျကို လြှော့ခလြိုကျတယျ။
တဖွေးဖွေးနဲ့အနားနီးလာတော့ အလငျးရောငျမှုနျမှုနျမှားမှားအခြိုက မခို့တရို့ဖြာကနြသေော လ်ဘကျရညျဆိုငျတဆိုငျကို ညီညီတှလေို့ကျရတယျ။
“အဟား…ငါတော့ကံကောငျးတာပဲ” ထိုငျခုံတှေ စားပှဲတှနေဲ့ မီးလငျးနတေဲ့ အဲ့ဒီခပျကုပျကုပျဆိုငျလေးရှမှေ့ာ ဆိုငျကယျကိုထိုးရပျလိုကျတယျ…။
မှိနျပပြမြီးရောငျအောကျမှာ လ်ဘကျရညျဆိုငျက ခွောကျကပျကပျနိုငျလှနျးနသေညျ။ “လူလညျးတဈယောကျမှမတှပေ့ါလား…” ဆိုငျရဲ့အတှငျးဘကျထိ သူဝကွေ့ညျ့လိုကျတယျ……။ အဲ့ဒီတော့မှ ကောငျတာစားပှဲပျေါခေါငျးတငျထားပွီး ပငျြးရိပငျြးတှဲပုံစံနဲ့မိနျးမတဈယောကျကို ညီညီတှတေ့ော့တယျ….။
“ဆိုငျရှငျဖွဈမယျထငျတယျ……”ဆိုငျရှငျမိနျးမကလညျး ဆိုငျပေါကျဝဘကျကိုမကျြနှာလှညျ့ပွီးမှောကျနတောမို့ ညီညီဝငျလာတာကိုမွငျရသညျ။ အဲ့ဒီမိနျးမကွီးက စားပှဲပျေါပါးအပျပွီး ငွိမျသကျနပေမေယျ့ မကျြလုံးတှကေိုတော့ဖှငျ့ထားတယျ…ပွီးတော့ညီညီ့ကို စိုကျကွညျ့နတေယျ…။
“လ်ဘကျရညျ ပေါ့ကြ တဈခှကျလောကျ…” အနားမှာတှတေဲ့ ဝိုငျးတခုမှာ ဝငျထိုငျရငျး ညီညီလှမျးမှာလိုကျတယျ…။ ရှဆေ့ကျပွီးမောငျးရဦးမှာဆိုတော့ အိပျမငိုကျအောငျ လ်ဘကျရညျကို ခပျကကြလြေးသောကျဖို့ ညီညီဆုံးဖွတျထားတယျ။
ဆိုငျရှငျမိနျးမက စားပှဲပျေါပါးအပျပွီး မှောကျနရောကနေ လေးလေးတှဲ့တှဲ့ဖွေးဖွေးခငျြးထလာတယျ…ပွီးတော့ အတှငျးဘကျဝငျသှားတယျ… အဲ့ဒီနောကျ လ်ဘကျရညျဖြျောသံ…… လ်ဘကျရညျခှကျထဲဇှနျးထညျ့မှသေံတှကွေားနရေတယျ… ခဏနတေော့ သူ့စားပှဲပျေါလ်ဘကျရညျပနျးကနျလာလပြေးပွီး ဘာစကားမှမပွောပဲ ပွနျလှညျ့ထှကျသှားတယျ…။
ပွီးတော့ ခုနကစားပှဲပျေါမှာပါးအပျပွီး ပွနျမှောကျနပွေနျတယျ…။ “ဘယျလိုလ်ဘကျရညျဆိုငျလဲဟ…တဈယောကျထဲရှိတဲ့လ်ဘကျရညျဆိုငျလား…” ညီညီစိတျထဲ ဘဝငျမကသြလိုမသိုးမသနျ့ဖွဈသလိုလိုဖွဈသှားပမေယျ့ ဆိုငျကယျရော လူရော ခတ်ေတအနားယူရနျမဖွဈမနလေိုအပျသညျမို့ စိတျထဲမထားတော့ပဲ လ်ဘကျရညျခှကျကို ယူပွီးမော့ခလြိုကျတော့တယျ……။
“အား………………… ဘယျလိုအရသာကွီးလဲ ! ” အလနျ့တကွားထအျောမိပွီး လ်ဘကျရညျခှကျကိုအောကျခံပနျးကနျပွားပျေါပွနျတငျလိုကျတယျ…။
အရသာက သူတဈကွိမျတဈခါမှ မသောကျဖူးတဲ့ အရသာကွီး…။ ခြိုတာလညျးမဟုတျ…စိမျ့တာလညျးမဟုတျ… ခါးတာလညျးမဟုတျ…ကတြာလညျးမဟုတျ… ဘာအရသာကွီးမှနျးကိုမသိတဲ့ အရသာကွီး……။ ဒေါသဖွဈသှားတဲ့ ညီညီမကျြလုံးတှကေ လ်ဘကျရညျဖြျောပေးတဲ့ မိနျးမဆီရောကျသှားတယျ…။
သူမကတော့စားပှဲပျေါပါးတငျထားတုံး… ခံစားမှုမဲ့တဲ့ လူသမေကျြလုံးတှနေဲ့ သူ့ကိုစိုကျကွညျ့နတေုံး… ညီညီ ရုတျတရကျကြောထဲစိမျ့ခနဲဖွဈသှားတယျ…။ စောနကထှကျနတေဲ့ ဒေါသတှတေောငျကွကျပြောကျငှကျပြောကျပြောကျကုနျကွတယျ… ပွီးတော့ ဒီနရောက မွနျမွနျသှားမှလို့လညျးသူတှေးမိလိုကျတယျ…။
“ဒီမှာ ပိုကျဆံ ထားခဲ့ပွီ…” သူကသြငျ့ငှကေို စားပှဲပျေါတငျပွီး ဘာမှနျးမသိတဲ့ လ်ဘကျရညျဆိုငျထဲကနေ ခပျသုတျသုတျပွေးထှကျလာခဲ့လိုကျတော့တယျ…။ ဆိုငျကယျပျေါတကျခှပွီး စကျမနှိုးခငျ အဲ့မိနျးမကွီးကို တဈခကျြပွနျကွညျ့လိုကျတော့… မိနျးမကွီးက ထုံးစံအတိုငျး စားပှဲပျေါမကျြနှာကွီး တစောငျးတငျ အသကျမပါတဲ့ မကျြလုံးတှနေဲ့ သူ့ကိုကွညျ့နတေုံးပဲ…။ ညီညီ ဘာမှဆကျစဉျးစားမနတေော့ပဲ ဆိုငျကယျစကျနှိုးပွီး ဝေါခနဲဆောငျ့ထှကျလာခဲ့တော့တယျ…။ တိတျဆိတျခွောကျကပျနတေဲ့ လမိုကျညကို ညီညီ ဆိုငျကယျသံက ပွနျပွီးလှမျးမိုးသှားပွနျတယျ။
“တောကျချ!…” အရေးထဲမှ အရာပျေါဆိုသလို လ်ဘကျရညျဆိုငျနဲ့ ဝါးနှဈပွနျကြျောကြျောလောကျအကှာအဝေးမှာ ဆိုငျကယျက ထိုးရပျသှားတယျ…။ စကျနှိုးလို့လဲမရတော့… ညအခြိနျမတျော လူကလဲပွတျ ဆိုငျကယျကလညျး ဆီရလေဝေိုငျ အကုနျစဈပွီးမှ စီးလာတာ…ခုမှဘာထဖောကျမှနျး သူမသိ…။
တျောတျောတော့အကွံအိုကျသှားတယျ။ နာရီဝကျနီးပါးကွာတဲ့အထိ ဆိုငျကယျကိုစကျပွနျနှိုးလိုကျ ပလပျဖွုတျဆေးလိုကျစသဖွငျ့မြိုးစုံလုပျနပေမေယျ့ စကျကနှိုး၍ မရ…။ ဒီပုံအတိုငျးဆိုလမျးမပျေါမှာပဲမိုးလငျးတော့မယျ့ပုံ…။ ခွငျတှကေလညျးမတရားကိုကျလာသညျ။ ခွငျပွေးလိုပွေးညား စီးကရကျတလိပျမီးညှိသောကျသျောလညျးမရ…။
စီးကရကျသောကျရငျး ညီညီ စဉျးစားလိုကျတယျ။ ခုနကသူဝငျခဲ့သညျ့လ်ဘကျရညျဆိုငျကသူကွားဖူးတဲ့ ကတျြကုနျးတို့ဘာတို့လိုဖွဈနမေလား… ဒါမှမဟုတျတကယျပဲ လ်ဘကျရညျဆိုငျအစဈလား…။ ဒါကိုလဲသူသိခငျြတယျ…။
“ဟူးး…မထူးတော့ဘူး နောကျပွနျလှညျ့တှနျးသှားပွီး အကူအညီတောငျးရတော့မှာပဲ…”
စီးကရကျလကျကနျြလေးကို ခပျပွငျးပွငျးဖှာရှိုကျလိုကျပွီး နငျးခပြေဈကာ ဆိုငျကယျကို လ်ဘကျရညျဆိုငျဘကျသို့ပွနျတှနျးလာခဲ့လိုကျတော့တယျ…။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရှေးခယျြစရာကလဲဒီတနညျးပဲရှိတော့တယျ…” တဈယောကျထဲ တီးတိုးရရှေတျရငျး ဆိုငျကယျကို ဆကျတှနျးလာလိုကျတယျ။ လူကလညျးအတေျာ့ကိုမောနပွျေီ။ခြှေးမြားလဲရှဲနဈနပွေီ…။
လ်ဘကျရညျဆိုငျရှရေ့ောကျတော့ ဆိုငျကယျကိုဒေါကျထောကျပွီး ဆိုငျထဲလှမျးကွညျ့လိုကျတော့… “ဆိုငျကယျပကျြလာတာလား…” ဆိုငျရှငျမိနျးမကွီးကလှမျးမေးတယျ…။ “ဟုတျကဲ့…” “မနကျကရြငျတော့ ဆိုငျကိုလူတှလောလိမျ့မယျ…အဲ့ခါကြ……အကူအညီတောငျးလိုကျပေါ့…ဒီညတော့……ဒီမှာပဲခနတညျး
ပါ” “ရတယျ…” ဆိုငျရှငျမိနျးမကွီး၏ အသံကခွောကျကပျကပျနိုငျနတေယျ။
ရုတျတရကျ ညီညီ မကျြလုံးတို့က သူထိုငျခဲ့သောဝိုငျးသို့ရောကျသှားတော့… “ဟငျ! ” သူတငျထားခဲ့သော ပိုကျဆံနဲ့ လ်ဘကျရညျခှကျက အခုထိမသိမျးရသေး…။ဒီမိနျးမကွီးတျောတျောအပငျြးကွီးတာပဲလို့ ညီညီတှေးလိုကျမိတယျ…။
“ဒါနဲ့ အမက ဒီမှာတဈယောကျထဲနတောလား…” “အေး……ဟုတျ……တယျ” “ညလုံးပေါကျဖှငျ့တာလား…”
“အေး……ဟုတျ……တယျ” “ယောကျြားသားမရှိဘူးလား ညလုံးပေါကျဖှငျ့တဲ့ဆိုငျမှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျထဲဆိုတော့အဆငျပွရေဲ့လား…” ပငျြးခွောကျခွောကျဖွဈနလေို့ ညီညီ က ဟိုမေးဒီမေးမေးနလေိုကျတယျ…
“အျော…ဟုတျကဲ့…” “မငျးအနားယူရငျယူတော့လေ…လှတျလှတျလပျလပျနလေို့ရတယျ……ငါတဈယောကျထဲမို့လို့သာ ဆိုငျထိုငျစောငျ့နရေတာ……အရမျးအိပျခငျြနပွေီ……ငါဝငျအိပျတော့မယျ……” “ဟုတျ……ဟုတျ” ဆိုငျရှငျမိနျးမကွီးက ပငျြးရိလေးတှဲ့စှာထပွီး အတှငျးထဲသို့ ဖွေးညှငျးစှာ တလှမျးခငျြးဝငျသှားတယျ… “သူတျောတျောအိပျခငျြနပေုံပဲ…ငါ့လိုသူစိမျးကိုတောငျစိတျခလြကျခထြားပွီး ဝငျအိပျသှားတယျ……” ဘာရယျမဟုတျ ညီညီတှေးမိလိုကျတယျ…။အဲ့ဒီနောကျ ခရီးလဲပနျးလာတာမို့ စားပှဲနှဈလုံးဆကျပွီးတကျအိပျလိုကျတော့တယျ…။
“ညီလေး…ညီလေး……” တစုံတယောကျရဲ့လှုပျနှိုးမှုကွောငျ့ ညီညီ အိပျနရောကနလေနျ့နိုးသှားတယျ…။ “ထပါအုံးညီလေးရဲ့…” “ဗြာ…ဟုတျ…” မကျြလုံးနှဈလုံးကိုအားယူပွီးဖှငျ့ကွညျ့လိုကျတော့ မိုးစငျစငျတောငျလငျးနပွေီ…။လူကွီးတဈယောကျနှငျ့အတူ အခွားလူငယျသုံးလေးဦးကိုတှလေို့ကျရသညျ။
“ညီလေးက ဘယျကလဲ…ဒီကိုဘာလာလုပျတာလဲ…” “ဗြာ…ကနြျော…ကနြျောကခရီးသှားပါ…ညကဆိုငျကယျပကျြသှားလို့ ဒီဆိုငျမှာအကူအညီတောငျးပွီး ခနဝငျတညျးတာပါ…” “ဟေ…” ညီညီစကားကိုကွားတော့ အဲ့လူတှမေကျြနှာမှာ အံ့သွသလိုလို ထိတျလနျ့သှားသလိုလို အမူအရာတှေ ဖွဈကုနျကွတယျ…။
“ဘာဖွဈလို့လဲခဗြ…” “ဘာ……ဘာမှမဖွဈပါဘူး…ညီ…ညီလေးညကဘယျသူု့ကို အကူအညီတောငျးခဲ့တာလဲ”
“ဘယျသူရှိရမှာလဲဗြ…ဒီဆိုငျရှငျမိနျးမကွီး ကိုပေါ့ဗြာ……” “ဟာ”…… လူစိမျးတဈသိုကျ နောကျကိုအနညျးငယျဆုတျသှားကွတယျ…ဒီလူတှရေဲ့အမူအရာကနညျးနညျးတော့ထူးဆနျးနတေယျ…
“ဘာမြားဖွဈလို့လဲခငျဗြ…” “ညီ…ညီလေး…ညက အကူအညီတောငျးခဲ့တဲ့ မိနျးမက ညီလေးနောကျက မိနျးမလား……” လူစိမျးတှပွေောလို့ညီညီနောကျကိုလှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့… “အောငျမလေးဗြ………” ငယျသံပါအောငျအျောပွီး သူထဆငျးပွေးလာလိုကျတယျ။
မပွေးနနေိုငျရိုးလား… သူအိပျနတေဲ့နရောရဲ့နောကျမှာ မိနျးမအလောငျးတလောငျးကဆနျ့ဆနျ့ကွီး…။ “ဟာ…ဘာ…ဘာတှဖွေဈကုနျတာလဲ…ဒီမိနျးမကွီးက ဘာလို့သသှေားတာလဲ…” “သတောနှဈရကျရှိပွီ…”
“ဗြာ……” လူစိမျးတဦး၏ စကားကွားတော့ ညီညီပိုပွီးခေါငျးနားပနျးကွီးသှားသညျ။
“မ…မဖွဈနိုငျတာပဲဗြာ…မနညေ့ကမှ ကနြျောနဲ့စကားပွောနသေေးတယျ…” “ဒါဆိုရငျတော့ ညီလေး သရဲအခွောကျခံလိုကျရတာဖွဈမယျ…”
ညီညီနှုတျက စကားတို့ထပျထှကျမလာတော့…။ “ဟုတျတယျကှ …ငါတို့ကရှာပွငျမှာသတေဲ့အလောငျးမို့လို့ ရှာပွငျမှာပဲပွငျထားတာ…” ညီညီညကသူတငျထားသောပိုကျဆံကိုသတိရသှားပွီးလှမျးကွညျ့လိုကျသညျ။ ပိုကျဆံက ညကတငျခဲ့တဲ့အတိုငျး…။ လ်ဘကျရညျခှကျကတော့မရှိ…။
ဒီမိနျးမကွီးကသတောနှဈရကျရှိပွီဆိုတော့ သူညက ညီညီကိုဖြျောတိုကျတဲ့ လ်ဘကျရညျကရော……ဘာလဲ…ညီညီ မစဉျးစားတတျတော့…။ “ဟိုစားပှဲပျေါကလ်ဘကျရညျခှကျလေးမြားအကိုတို့သိမျးလိုကျမိသေးလား…”
“ဘာလ်ဘကျရညျခှကျလဲ…မသိမျးပါဘူး…ငါတို့လာထဲက မငျးကိုအလောငျးဘေးနားအိပျနလေို့ တနျးပွီးလာနှိုးတာ…”
“ဟာ…ဟုတျလား…ဒါဆို ဒီလ်ဘကျရညျဆိုငျကရောပိတျထားတာပေါ့ဟုတျလား…” “ဘာလ်ဘကျရညျဆိုငျလဲ…ဘာလ်ဘကျရညျဆိုငျမှမဟုတျဘူး…အလောငျးအတှကျပွငျထားတဲ့အလောငျးစငျနဲ့…
“ဗြာ……” ညီညီ အခုမှသတိထားကွညျ့မိတော့ ညကသူတှခေဲ့တဲ့ ထိုငျခုံတှစေားပှဲခုံတှကေ လ်ဘကျရညျဆိုငျမို့ခထြားတဲ့ခုံတှမေဟုတျပဲ…အသုဘအတှကျခထြားတဲ့ ခုံတှစေားပှဲတှဖွေဈနတေယျ…။
ဟိုမိနျးမကွီးညက ခေါငျးတစောငျးတငျထားသညျ့ကောငျတာစားပှဲကလညျး အခေါငျးကွီး ဖွဈနတေယျ…။ “ဟုတျတယျကှ…ငါတို့လဲ အသုဘစောငျ့ဖို့ ဒီနှဈကောငျကို အရကျဖိုးပေးပွီး လှတျထားတာ…ညကအရကျဆိုငျမှာအမူးလှနျပွီး လာမစောငျ့မိဘူးတဲ့လေ…အဲ့ဒါနဲ့ဒီမနကျလာကွညျ့တော့မငျးကိုတှတေ့ာနဲ့ငါ့ကိုလာချေါကွတာပဲ…”
“အကိုက ……” “အေး ငါက ဒီနားကရှာက ရာအိမျမှူးပဲ…နာမညျက ကိုပွညျ့လို့ချေါတယျ…” “ဒီနားမှာရှာရှိတယျလား…ကနြျောညက မတှမေိ့ပါဘူး…” “ရှိတယျ…ဒါပမေယျ့ကားလမျးဘေးက လှညျးလမျးအတိုငျးဆငျးသှားရတာ…တျောတျောတော့ဝေးတယျ…”
“အျော…ဒါ့ကွောငျ့ ညကမမွငျမိတာကိုး…ဒါနဲ့သူ့ယောကျြားဆိုတာကရော…” “သူ့ယောကျြားထှနျးမောငျ ဆုံးသှားတာဖွငျ့အရိုးတောငျဆှေးတော့မယျဟ…” “ဗြာ…………”
ဟိုငျးဝေးလမျးပျေါမှာ ခရီးသှားရငျး အသုဘတဲနဲ့ လ်ဘကျရညျဆိုငျမှားပီး သရဲဖြျောတဲ့ လ်ဘကျရညျဝငျသောကျမိတဲ့ ညီညီတဈယောကျ…
အဲ့ဒီနအေဲ့ဒီအခြိနျကစပွီး ဆိုငျကယျအရောငျးအဝယျကိုတတျနိုငျသမြှ ကားနဲ့ပဲတငျပွီး မလှဲသာတဲ့အခါမြိုးမှသာ ဆိုငျကယျနဲ့ကိုယျတိုငျသှားတော့တယျ … သှားတဲ့အခါလညျး လမျးမှာ ဘယျလ်ဘကျရညျဆိုငျတှတှေ့ဝေ့ငျမသောကျရဲတော့ပါဘူးတဲ့ဗြာ……………။ ။
Credit: ပရလောက၏ သညျးထိတျ ရငျဖို ဖွဈရပျမြား